Firenena sy seranam-piaramanidina manaiky ny làlana fitsangatsanganana IATA
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Firenena sy seranam-piaramanidina manaiky ny làlana fitsangatsanganana IATA
Ny manidina mandritra ny krizy COVID-19 dia nanjary mora kokoa tamin'ny alàlan'ny fanampian'ny International Air Transport Association (IATA) sy ny IATA Travel Pass vaovao. Ankatoavina izao dia ekena any amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy firenena mandray anjara.
Seranam-piaramanidina 20 no manaiky sy manome voninahitra ny IATA Travel Pass ho an'ireo mpandeha ao aminy. Jereo ny lisitra.
Singapore no firenena voalohany nanaiky ny IATA Travel Pass, firenena maro no manaraka
IATA Pass dia hetsiky ny vondrona fiaramanidina manerantany hampirisika ny fanokafana sisintany mandritra ny areti-mandringana COVID-19.
Aorian'ny zotram-piaramanidina 20 hanaiky ny IATA Travel Pass vaovao, ankehitriny koa ny firenena voalohany dia mandray ireo mpitsidika manana pass IATA.
The International Fikambanan'ny fitaterana an'habakabaka (IATA) nankasitraka ny faneken'i Singapaoro ny valin'ny fitsapana PCV COVID-19 talohan'ny niaingany tao amin'ny IATA Travel Pass.
Manomboka amin'ny 1 Mey 2021, ny mpandeha mandeha any Singapore dia afaka mampiasa IATA Travel Pass hizara ny valin'ny fitsapana COVID-19 PCR mialoha ny fiaingany amin'ny zotram-piaramanidina misy azy ireo, ary koa amin'ny fahatongavana amin'ny toeram-pisavana fifindra-monina ao amin'ny seranam-piaramanidina Changi. Ity dia ampahany amin'ny fiaraha-miasa mitohy eo amin'ny Corporate Aviation Authority of Singapore (CAAS) sy IATA hanamorana ny dia tsy misy fotony sy mahomby amin'ny alàlan'ny fanamarinana nomerika fitsapana COVID-19.
Ny fanokafana indray ny sisin-tany tsy misy quarantine sy hanombohana ny governemanta fiaramanidina dia mila matoky fa manatsara ny risika fanafarana COVID-19 izy ireo. Midika izany fa manana fampahalalana marina momba ny toetran'ny mpandeha COVID-19.
Ny fampahafantarana ireo mpandeha ny fitsapana, ny vaksininy ary ny fepetra hafa takian'izy ireo alohan'ny dia, ny antsipirihany momba ny toerana ahafahany manao fitiliana sy manome azy ireo fahaizana mizara ny valin'ny fitsapana azy ireo amin'ny fomba voamarina, azo antoka ary miaro amin'ny fiainana manokana no lakilen'ny fanomezana ny fahatokisan'ny governemanta ny fisokafan'ny sisintany. Mba hiatrehana io fanamby io dia miasa ny IATA amin'ny fandefasana ny IATA Travel Pass, sehatra nomerika ho an'ny mpandeha.
“Ny fananana fahatokisan'ny mpitarika fiaramanidina toa an'i Singapore manaiky ny IATA Travel Pass dia manan-danja tokoa. Ny fitsapana mitohy dia mametraka antsika amin'ny làlana IATA Travel Pass ho fitaovana lehibe hanombohana indray ny indostria amin'ny alàlan'ny fanaterana taratasim-pahasalamana momba ny dia amin'ny fanjakana. Ary ny mpandeha dia afaka matoky tanteraka fa ny angon-drakitra manokana ananany dia azo antoka ary eo ambany fifehezany manokana. Ny fahombiazan'ny ezaka iarahanay dia hahatonga ny fiaraha-miasan'ny IATA sy ny governemantan'i Singapore ho maodely harahan'ny hafa ", hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
“Nanorina teo amin'ny fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ny IATA izahay mba hamolavolana vahaolana hanamorana ny dia. Ity fiaraha-miasa farany ity miaraka amin'ny IATA dia mampiseho ny fahavononantsika hiasa hitondra ny fananganana mari-pahaizana momba ny fahasalamana nomerika ary hamerina ny dia an-dranomasina iraisampirenena. Rehefa mijery ny fanamboarana ny tobin'ny rivotra Changi izahay dia hanohy hikaroka vahaolana hafa izay afaka manome fomba azo antoka sy azo hamaritana fizarana mari-pahaizana momba ny fahasalamana amin'ny dia iraisam-pirenena azo antoka ”, hoy i Kevin Shum, Tale Jeneraly CAAS.
Ny mari-pahaizana momba ny fahasalamana nomerika dia ho singa iray lehibe amin'ny fivezivezin'ny rivotra mandroso. Ny fametrahana vahaolana azo itokisana sy azo antoka hanamarinana ny mari-pahaizan'ireo mpitsangatsangana dia ho zava-dehibe amin'ny fanamorana ny fivezivezin'ny rivotra sy ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Ny IATA Travel Pass dia vahaolana amin'ny kitapom-bola nomerika azo antoka azo ampiasain'ny mpandeha hahazoana sy hitahiry ny valin'ny fitsapana COVID-19 avy amin'ny laboratoara nahazo fankatoavana.
Taorian'ny fisedrana nahomby nataon'ny Singapore Airlines, ny manampahefana misahana ny fahasalamana sy ny fifehezana ny sisintany ao Singapore dia hanaiky ny IATA Travel Pass ho endrika fampisehoana valin'ny valin'ny fitsapana mialoha ny fiaingana COVID-19 hidirana ao Singapore. Ny fampahalalana naroso tao amin'ny IATA Travel Pass dia ho amin'ny endrika izay manome fahafaham-po ny filan'ny COVID-19 fitsapana mialoha ny fiainganan'i Singapour amin'ny fidirana ao Singapaoro.
Orinasa mihoatra ny 20 no nanambara ny fitsapana ny IATA Travel Pass.
Airlines manandrana ny IATA Travel Pass
Ireo mpitsangatsangana any Singapour izay mikasa ny hampiasa ny IATA Travel Pass dia tokony hanamarina ny zotram-piaramanidina miaraka aminy hahazoana fahazoana mampiasa ny IATA Travel Pass.